tọrọ ntọala : 2008
Students (ihe ruru.) : 10000
Echefukwala discuss University of Jazeera
The University of Jazeera kasị prefered mahadum Emirates nke Dubai, dị ka anyị imesi muta, ọkachamara na onye uto nke nwa akwụkwọ ọ bụla. Anyị na-ewepụtara na mma na nkuzi, mmụta, na research, na-emepe emepe ndú ọtụtụ ọzụzụ na-eme ka a dị n'ụwa nile.
Ebe ọ bụ na ya inception, UoJ akanamde onwe ya ka na-enye a ụwa-klas mmụta na-akwadebe ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, ha n'onwe ya na professionally maka ihe ịga nke ọma ọrụ na ha họọrọ ubi. UoJ ngalaba na-arụ na-ezi ihe ma research inupụ ókè nke ụmụ mmadụ ihe ọmụma. N'ihi na ụmụ akwụkwọ ndị nwere oké obi ụtọ na ichoputa nnukwu nsogbu nke 21stna narị afọ, UoJ awade na-enweghị atụ na-amụrụ ahụmahụ na a na-emesapụ aka enyemaka ego usoro ihe omume.
Izi ihe anyị na obibia bụ usoro na-abara; anyị lekwasịrị anya bụ bridging tiori na omume, dị ka anyị curricula bụ ọrụ na-akwali na nkà dabeere. Anyị elekwasị anya bụ na-amụrụ, na ihe ịga nke ọma na anyị Alumni na-egosipụta na-egosi na na ntị
iwu & Economics Faculty
Ozi teknụzụ & Design Faculty
The university has been successfully offering Bachelor in Law and Economics, Bachelor nke Business Administration, Bachelor of Media and Communication Sciences, Bachelor of Science in Information Systems and Technology, Master nke Business Administration, Master of Private Law, Master of Public Law, Postgraduate Diploma in Private Law, and Postgraduate Diploma in Public Law.
Ị chọrọ discuss University of Jazeera ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
American University na Dubai Dubai
Ras al-Khaimah Medical na Health Sciences University Ras al-Khaimah